Faritra Anosy sy Androy: nojeren’ny minisiteran’ny Indostria ny momba ny kere - ewa.mg
News - Faritra Anosy sy Androy: nojeren’ny minisiteran’ny Indostria ny momba ny kere
Ny 23 sy ny 24 oktobra teo,
nitarika atrikasa tany amin’ny faritra Anosy ny minisitry ny
Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica), Rakotomalala
Lantosoa. Atrikasa hiatrehana ny kere any atsimo, araka ny
toromariky ny filohan’ny Repoblika, ny natao tamin’izany, niarahana
amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana.
Anisan’ny laharam-pahamehana ny
famatsiana ireo zavatra ilaina andavanandro (PPN) any amin’ny
faritra hamahana ny olana sy hanamorana ny fizarana izany any
amin’ny faritra Anosy sy Androy, amin’ny vidiny rariny. Nandritra
izany fotoana izany, nohararaotin’ny minisitra ny fandalovana
amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala, nandraisana kaontenera 150, izay
tsy ho tapaka isaky ny telo volana. Ny 75 % amin’ireo PPN ireo
tonga tao amin’ny seranan-tsambo. Nitarika fivoriana niaraka
amin’ireo tompon’andraikitra any an-toerana ny minisitra. Hatao
izay fomba rehetra hizarana izany ara-drariny ho an’ireo faritra
Fepetra noraisina koa ny fiarovana
ny mpanjifa, nizahana ireo entana any amin’ny mpamongady, ny
fizahana natao tampoka. Hita ary nakatona tamin’izany ireo
tranombarotra lehibe tsy manana antontan-taratasy, manamarina fa
afaka mampisondrotra ny vidin-javatra. Nisy koa ny fihaonana
amin’ireo mpanao asa tanana, nifanakalozan-kevitra hitadiavana
lalam-barotra. Namaranana ny fitsidihan’ny minisitra Rakotomalala
Lantosoa, nitsidika ny orinasa mpanodina vokatry ny fambolena,
anisan’ny vahaolana amin’ny ady amin’ny faharatsian-tsakafo.
L’article Faritra Anosy sy Androy: nojeren’ny minisiteran’ny Indostria ny momba ny kere a été récupéré chez Newsmada.
PM: “Tsy ekena ny mpiasam-panjakana miandany”
“Mazava ny momba an’izay… Nametraka hatrany isika fa tokony hohajaina ny tsy fitanilana eo amin’ny mpiasam-panjakana. Izao ny zava-misy: be dia be ieo kandidà solombavambahoaka mimenomenona fa misy mpiasam-panjakana miandany atsy na aroa.”Io ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Antaninarenina, omaly, momba ireo mpiasam-panjakana sasany mihoa-pefy sy miandany amina kandidà ao anatin’izao fampielezana-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao.Tsy tokony hohadinoina fa ny fiandanian’ny mpiasam-panjakana misy amin’izao fotoana izao, kandidà maro dia maro no voatonontonona amin’izany ary avy amin’ny hery politika maro.Tsotra ny hafatra ataony: manamafy ny tokony ho fampiharana ny lalàna eo amin’ny mpiasam-panjakana rehetra. “Tsy aty amin’ny minisitera fotsiny io mpiasam-panjakana io, fa any amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana koa: any amin’ny kaominina, fokontany…”, hoy izy.Maro koa ny mpiasam-panjakana mitanila sy miandany amina kandidà any, arakaraka ny loko politika misy. Amin’ny ankapobeny, tsy azo ekena izay zavatra izay.Hisy àry ve ny fampiharan-dalàna amin’izay tsy fanekena mpiasam-panjakana miandany amin’ny kandidà izay? Eo ihany koa ireo mampiasa fitaovam-panjakana amin’izany…R.Nd.L’article PM: “Tsy ekena ny mpiasam-panjakana miandany” a été récupéré chez Newsmada.
Famatsiam-bola vahiny-Covid-19 : 186,4 tapitrisa dolara ny vola efa azo
Ela ny ela, nanome ny an­tsipiriany mikasika ny fama­tsiam-bola avy amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hiadiana ny Covid-19 ny fanjakana malagasy, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fitanta­nam­bola sy ny Toekarena. Mitotaly 671,73 tapitrisa dolara ny sora-bola azo na koa mbola hifampidinihina miaraka amin’ny mpamatsy vola. Efa nivoaka, nirotsaka tao anatin’ny kitapombolam-panjakana ny 186,4 tapitrisa dolara tamin’io avy amin’ny Ban­ky iraisam-pirenena (BM) sy ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI). Nanentsenana ny tetibolam-panjakana sady nampiasaina tamin’ny fandaniana ara-tsosialy ny 165, 99 tapitrisa dolara tamin’io, avy amin’ny FMI. Namatsiana ny drafitrasa hifehezana ny Covid-19 kosa ny 20,41 tapitrisa dolara avy amin’ny BM, nividianana fitaovana, toy ny “respirateurs”, ny “concentrateursd’oxygènes”, ny “radiographies numériques” ary ny fitaovana fiarovana ho an’ny mpitsabo, toy ny EPI. Namoa­hana ny fanampiana sosialy “Tosika fameno” ho an’ny fianakaviana marefo miisa 150.000 koa ny 4,67 tapitrisa dolara tamin’io avy amin’ny BM io. Mitentina 483,33 tapitrisa dolara ny vola, izay mbola eo an-dalam-pifampidinihana sy efa vita sonia, saingy tsy mbo­la navoakan’ny mpamatsy vola.Njaka A.L’article Famatsiam-bola vahiny-Covid-19 : 186,4 tapitrisa dolara ny vola efa azo a été récupéré chez Newsmada.
Hanamarika ny faran’ity herinandro ity ny “Ambohimalaza Time Attack 1.0”. “Zava-baovao eo amin’ny taranja mekanika izy ity”, hoy ny fanazavana nentin-dRandriamorasata Ditratiana, mpikarakara. Gazety Taratra (*): Inona ilay hetsika “Ambohimalaza Time Attack 1.0”?Randriamorasata Ditratiana (-): Hetsika karakarain’ny X’Inov créateur d’impact sy ny BMC ary ny MCM sy ny Trace izy ity ary hazakazaka adim-pamantaranandro natokana ho an’ny moto manana motera lehibe sy matanjaka (grosses cylindrées), tanterahina amin’ny lala-miakatra mampitohy an’Ambohimalaza sy Imerinkasinina, mirefy 4,03 km.(*): Maninona no “grosses cylindrées” fa tsy ny moto rehetra?(- ): Tsotra ny antony, efa manana ny hetsika sy ny fifaninanana ho azy ny moto kely toy ny “scooter” sy ny hafa ka amin’ity, omena sehatra manokana ny moto lehibe, sady hamerenana indray ny fitiavan’ny olona izany fanatanjahantena mekanika izany, taorian’ny fihiboana naharitra fito volana.(*): Antony nizarana azy ireo ho ao anaty sokajy fito?(-): Na samy moto lehibe aza ireo, tsy mitovy avokoa ny tanjany ary samy manana ny endriny avy ny tsirairay. Noho izany, tsy maintsy sarahina ka ampiarahina izay mitovy hery, hampifandanja tsara ny hazakazaka. Raha tsiahivina, ny Chopper, ny Trail, ny Maxiscooter, ny Super motard, ny Roadster, ny Sportive ary ny Custom Vintage ireo sokajy hifaninanana.(*): Inona ny mason-tsivana ho fandraisana anjara?(-): Anisan’ny takinay amin’ny mpifaninana rehetra ny fitondrana ny aroloha, ny arotratra ny arovatana sy ny baoty ary ny arolohalika. Eo koa ny fizahana teknika ny moto ary ny fizaham-pahasalamana ho an’ny mpifaninana tsirairay. Raha misy tsy feno ireo, tsy azo atao ny mandray anjara. Ankoatra izay, ferana ho 50 ihany ny isan’ny mpandray anjara.(*): Misy fetra ve ny taon’ny mpifaninana?(-): Misokatra ho an’ny rehetra ny “Ambohimalaza Time Attack 1.0”, saingy kosa mila taratasy fanekena avy amin’ny ray aman-dreny ho an’ireo mpifaninana tsy ampy taona. Hisy “licence journalière” omen’ny federasiona ho an’ireo tsy ao anaty klioba.(*): Nisy ilay lozam-pifamoivoizana, nitranga herinandro lasa. Inona no fepetra raisin’ny mpikarakara.(-): Tanjonay ny mitandro ny ain’ny mpifaninana rehetra. Mba hisorohana ny loza, tsy maintsy hidina ny lalana rehetra ka tsy misy fiara na moto mahazo mandeha mandritra ny fifaninanana. Fefena ny toerana misy ny mpijery sy ny mpifaninana, amin’io.(*): Hisy mpifaninana avy any ivelany ve amin’ity?(-): Efa nisy niantso anay ireo mpifaninana avy atsy La Réunion sy avy any Frantsa fa miandry ny fisoratana anaran’izy ireo izahay izao. Anisan’ny tadiaviny mantsy ny zava-baovao tsy mbola nisy teto Madagasikara toy ity “Ambohimalaza Time Attack 1.0” ity.(*): Ankoatra azy ireo, mety hahitana mpifaninana vehivavy ve?(-): I Karen, vehivavy malagasy mpitondra moto lehibe. Efa nanambara ny fahavononany amin’ny fandraisana anjara izy ary inoanay fa ho anisan’ireo hifaninana ny tenany. Ankoatra azy, andrasan’ny rehetra koa ny fifanandrinana eo amin’ireo zandrikely kalaza toa an’i Harena sy i Anjo.(*): Ahoana ny fankasitrahana ho an’ny mpandresy sy ny hafatry ny mpikarakara?(-): Hahazo amboara avokoa ireo telo voalohany isaky ny sokajy mifaninana. Hisy koa fisarihana hahazoana loka hafa, ho azy ireo, avy amin’ireo mpanohana sy mpiara-miasa izay efa isaorana eto sahady. Tsy ho diso anjara amin’izany koa ny mpijery. Tongava maro fa zava-baovao be ity “Ambohimalaza Time Attack 1.0” ity. Hahafinaritra ny lalao ary tsy ho diso fanantenana ny mpankafy sy ny mpanatrika. Dinika nangonin’i TorcelinL’article “Ambohimalaza Time Attack 1.0”: Motobe 50 hifaninana amin’ny sokajy fito a été récupéré chez Newsmada.